उपत्यकामा २०० भन्दा बढी नयाँ संक्रमित, कुन स्थानमा कति ? – Suchana Hub
उपत्यकामा २०० भन्दा बढी नयाँ संक्रमित, कुन स्थानमा कति ?
काठमाडौं । दिनहुँ रुपमा संक्रमित थपिने क्रममा आज देशभरमा कुल ४ हजार ३ सय ९२ जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् । तिमध्य काठमाडौं उपत्यकामा मात्र थप २ हजार ४ सय २ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
तीमध्य काठमाडौं जिल्लामा मात्र १ हजार ७ सय ८४ जना रहेका छन् भने ललितपुरमा ३ सय ७४ जना र भक्तपुरमा २ सय ४४ जना रहेका छन् ।
Previous गएको २४ घण्टामा २१ मृत्युसहित थपिए यति धेरै संक्रमित
Next एकैदिन थपिए ४ लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित